बुटवल : तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले थालेको बृद्धभत्ता बढेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४ हजार पुगेको छ । शनिवार प्रस्तुत बजेटमा बृद्धभत्ता बढाएर ४ हजार पु¥याइएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । एमालेकै नेतृत्वको सरकारले थालेको बृद्धभत्ता कार्यक्रम पटक पटक एमालेकै सरकार हुँदा बढाउँदै लगेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको समेत जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुरा भएका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गरेका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक भत्ता बुझ्ने गर्छन् ।
२०६० सालमा अधिकारीले नै वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पु¥याएका थिए । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ हजार पु¥याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पु¥याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पु¥याएका थिए ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुरा भएका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गरेका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक भत्ता बुझ्ने गर्छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ १५, २०७८, ०५:०१:१९